chan nyein thar's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
chan nyein thar
Blog PostsDiscussions (5)EventsGroups chan nyein thar's Likes chan nyein thar's Discussions
Myanmar Browser with Myanmar Keyboard for iOS Devices
"မြန်မာကီးဘုတ် ပါတဲ့ မြန်မာ browser လေးပါ.. WeBrowse ကို app store မှာ ဒေါင်းလုပ်ချလုို့ ရပါပြီ. စမ်းသုံးပေးကြပါဦးခင်ဗျာ"…Continue Started Jan 6, 2013 Pervasive Database
Pervasive Database ကို installer လုပ်ချင်ပါတယ်server for window ကို တင်လို့ မရပါဘူးclient for window ကိုတော့တင်လို့ ရပါတယ်new database ကို create လုပ်လို့ မရပါဘူးvista 32 bit ကိုတင်ထားပါတယ် ဘာလို…Continue Started Nov 9, 2010 wireless ပြသနာဗျို့ 
ကျွန်တော့်စက်မှာဗျာ... wireless adapter သုံးပြီးတေ့ာ wireless network သုံးနေတာဗျ..ညကထိအကောင်း...မနက်ကျမှ signal ကိုတော့မြင်ရတယ်... IP မရဘူး... acquiring ပဲဖြစ်နေတယ်..router ကိုလည်း restart…Continue Started this discussion. Last reply by Kyaw Nanda Oo Feb 27, 2012. EXE ဖိုင်တွေပြသနာဖြစ်နေတယ်ဗျာ
ကျွန်တော့်စက်မှာဗျာ ဖိုင်တွေကိုစက်ထဲ download ချတယ်ဗျာ.ချက်ချင်း run ရင်အလုပ်လုပ်တယ်..အဲ...နောက်တခါ restart ချပြီးတော့ ပြန် run ရင် အဲ့ကောင်တွေက အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး..error လည်းမပြဘူး...install…Continue Started this discussion. Last reply by AungAungAyeOo Mar 22, 2010. View All
chan nyein thar has not received any gifts yet
chan nyein thar's Page
chan nyein thar postedadiscussionMyanmar Browser with Myanmar Keyboard for iOS Devices"မြန်မာကီးဘုတ် ပါတဲ့ မြန်မာ browser လေးပါ.. WeBrowse ကို app store မှာ ဒေါင်းလုပ်ချလုို့ ရပါပြီ. စမ်းသုံးပေးကြပါဦးခင်ဗျာ"https://itunes.apple.com/sg/app/webrowse-free/id578621435?mt=8See MoreJan 6, 2013 0
chan nyein thar postedastatus"မြန်မာကီးဘုတ် ပါတဲ့ မြန်မာ browser လေးပါ.. WeBrowse ကို app store မှာ ဒေါင်းလုပ်ချလုို့ ရပါပြီ. စမ်းသုံးပေးကြပါဦးခင်ဗျာ"Jan 6, 2013 0
chan nyein thar postedastatus"Myanmar Browser With Myanmar Keyboard On App Store.
WeBrowse App…"Jan 6, 2013 0
At 9:16am on November 6, 2010, chan nyein thar said… Pervasive Database ကို installer လုပ်ချင်ပါတယ်
server for window ကို တင်လို့ မရပါဘူး
client for window ကိုတော့တင်လို့ ရပါတယ်
new database ကို create လုပ်လို့ မရပါဘူး
vista 32 bit ကိုတင်ထားပါတယ် ဘာလို့ ပါလဲ No comments yet!